Teknika famolavolana tranonkala manan-danja hampidirina ao amin'ny tranokalan'ny Law Firm | Martech Zone
Teknika famolavolana tranonkala manan-danja hampidirina ao amin'ny tranokalan'ny Law Firm
Alakamisy 21 martsa 2019 Alakamisy 21 martsa 2019 Bryan
Miha-mifaninana hatrany ny tsena ara-dalàna ankehitriny. Vokatr'izany dia mitazona tsindry be dia be amin'ireo mpisolovava sy orinasam-pitsarana maro mba hiavaka amin'ny sisa amin'ny fifaninanana.
Sarotra ny mikely aina a fisian'ny matihanina amin'ny Internet. Raha tsy manery ny tranokalanao dia miroso amin'ireo mpifaninana aminao ny mpanjifa.
Izany no antony, ny marika (ary ao anatin'izany ny tranokalanao) dia tokony hisy fiatraikany lehibe amin'ny orinasanao, manampy anao hahita mpanjifa vaovao, ary hampitombo ny vola azonao.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hitety anao amin'ny teknika famolavolana tranonkala manan-danja izay azonao ampidirina ao amin'ny tranonkalanao ianao:
Mikasa mialoha alohan'ny zavatra hafa
Ny tranonkalanao dia maneho ny orinasanao, ny asanao - ny marikao.Rehefa mitsidika ny tranokalanao voalohany ireo mpampiasa tranonkala dia efa manana fahatsapana voalohany niforona izy ireo.
Noho izany, raha diso ny modely ampiasainao ary toa mitovy amin'ny orinasa an-jatony maro amin'ny Internet ny tranokalanao, dia tsy hahomby ianao raha hanao fiheverana miavaka amin'ny mpihaino anao.
Fa maninona ny mpanjifa no mahatadidy anao raha toa ny tranokalanao sahala amin'ny orinasa maro am-polony hitan'izy ireo?
Noho izany, manaova drafitra mifanaraka amin'izany. Ireto misy toro-hevitra roa:
Kely kokoa. Aza mameno lahatsoratra sy sary amin'ny tranokalanao. Aleo mifantoka amin'ireo lafin-javatra hahatonga ny votoatinao ho azo vakiana sy hitaona.
Mety hanandrana hiditra amin'ny finday samihafa ny mpitsidika. Noho izany, aza asiana endri-javatra sarotra amin'ny pejin-tranonkalanao toy ny sary mihetsika. Aza atao koa ny mandrafitra ny pejinao amin'ny fomba mety amin'ny haben'ny efijery lehibe ihany.
Hamarino tsara fa manana famolavolana logo matihanina ianao. Hamarino tsara fa tsy manam-paharoa izy; raha tsy izany dia mamorona fahatsapana ratsy ianao. Ankoatr'izay, mety hampidi-doza anao amin'ny lalàna koa ianao.
Mihazakazaha fitsapana. Fantaro izay karazana atiny, loko ary bokotra ahazoanao ny tsindry indrindra azonao.
Mandresy lahatra ireo mpampiasa anao handray andraikitra. Eritrereto hoe inona ny hetsika tianao hataon'ny mpampiasa anao a fiantsoam-bahoaka malaza.
Mifantoha amin'ny atiny
Raha mbola tsy fantatrao izany, tranokalan'ny motera fikarohana miorina amin'ny rohy sy ny kalitaon'ny atiny. Noho izany, arakaraka ny hamoahan'ny atiny avoakanao no hahasarika kokoa ny motera fikarohana.
Hamarino tsara fa mamoaka atiny vaovao sy mahavariana ary avo lenta foana ianao. Mety hisy ny mpitsidika tranonkala handao ny tranokalanao ny fananana votoaty ratsy.
Ankoatr'izay, aza atao ambanin-javatra ny fanaovana lohateny lehibe. Izy ireo dia afaka manisy fahasamihafana eo amin'ny mpitsidika tranonkala iray mamaky ny sisa amin'ny atiny na mandao ny tranokalanao.
Eritrereto ny fitetezana anao
Mila miezaka mitady tranokala mora zahana ianao. Hamarino tsara fa izany koa mamaly ny karazana fitaovana rehetra - avy amin'ny smartphone, tablette, solosaina birao sns.
Ireto misy zavatra hafa hodinihina amin'ny fiantohana fa manangana tranokala mora ampiasaina ianao:
Tazomy tsy ho rohy tsy ilaina ny fitetezana voalohany.
Hamarino tsara fa mora vakiana ny atiny.
Ataovy kely ny fanelingelenana hafa toa ny popup, sary mihetsika, filalaovana horonan-tsary mandeha ho azy sy atiny multimedia hafa, sns.
Raha manangana tranokala mahasosotra sy sarotra ampiasaina ianao dia hampiala ny mpanjifanao ho avy. Mba hahazoana antoka fa tsy manjo anao izany dia mikaroha tranokala mora zahana.
Mampiasà sary mifandraika foana
Rehefa manampy sary ao amin'ny tranonkalanao ianao dia mety ho toa safidy mahitsy kokoa ny fisafidianana sary stock. Saingy misy ny lesoka ihany koa. Ny vintana dia efa ampiasain'ny orinasa mpanao lalàna maro hafa (raha tsy an'arivony).
Raha te-hiavaka amin'ny fonosana sisa ianao dia mila mampiasa sary avo lenta izay manokana manokana amin'ny marikao.
Noho izany, maninona raha asehonao ireo sary ireo ny biraonao sy ny ekipanao? Izy io dia mampiavaka ny marikao ihany koa.
Ohatra, azonao aseho ny sarin'ny mpisolovava anao na ny biraon'ny birao misy anao. Ny fanaovana izany dia miteraka endrika mafana sy mahaliana kokoa eo amin'ny tranokalanao.
Ampidiro ny fijoroana ho vavolombelona momba ny mpanjifa
Araka ny Amazelaw - Ny olona sasany dia mazàna manombatombana orinasa mpamokatra lalàna mifototra amin'ny torohevitra sy fijoroana ho vavolon'ny mpanjifa hafa. Aza matahotra ny mampiasa azy io ho tombontsoanao.
Azonao atao ny mametraka fijoroana vavolombelona amin'ny pejin-tranonkalanao na mamorona pejy misaraka amin'ny tranokalanao. Ankoatr'izay, azonao atao koa ny manasongadina ireo amin'ny piraofilin'ny mpisolovava anao.
Manana tranokala vonona SEO
Ny tranokalanao dia mila havaozina ho an'ny milina fikarohana ka hijinja ny tombony azo avy amin'ny fivezivezena ara-organika.
Ireto misy zavatra roa tokony hotadidina ao amin'ny SEO:
Sorohy ny famenoana teny lakile satria mety hitarika motera fikarohana toy ny Google manasazy ny tranokalanao izany.
Ampiasao ny soratra alt sy ny anarana sahaza ny sary satria manampy ny motera fikarohana hahafantatra tsara kokoa ny atiny ianao. Ambonin'izany, ampiasao koa ny fandefasana format mety ho an'ny lahatsoratrao.
Aza mampiasa "tsindrio eto" na "tsindrio ity" ho an'ny rohy, fa ampiasao ny famaritana ny toe-javatra, satria mahatonga ny mpamaky hahatakatra ny dikan'ilay rohy misy anao. Manampy ny motera fikarohana hahafantatra raha mampifandray amin'ny loharanom-baovao mifandraika ianao na tsia.
Eny ary, eo ianao no manana azy! Antenaina fa ireto toro-hevitra ireto dia hametraka anao any amin'ny làlana tsara amin'ny famoronana tranokala mpiasan'ny lalàna mirotsaka sy tsy manam-paharoa izay hamadika ny mpitsidika anao ho mpanjifa maharitra.
Tags: panjakanatranokalan'ny lalànatranokalan'ny mpisolovavamamaly ny findaySEOMalagasy famolavolana
Bryan Mixon no tompon'ny AmazeLaw, tranokala fananganana mpisolovava irery sy orinasa kely. Byran dia nanangana tranokala nanomboka ny taona 1999 ary nandany ny efa-taona farany nanampiany ny orinasa toa ny HubSpot, Mill33 ary LivingSocial. Fantatr'i Bryan manokana fa sarotra amin'ny tompona orinasa kely ny miala amin'ny marketing nomerika, noho izany dia nanangana AmazeLaw ho toerana tsotra be ho an'ireo mpisolovava irery izy hanangana ny tranonkalany, manangona fitarihana ary mandroso amin'ny androny manao zavatra mpisolovava.